HBO Now छात्र छूट (२०२०) - कसरी आवेदन गर्ने? - कसरी
कसरी HBO अब विद्यार्थी छुट छ?
HBO Now एक स्ट्रीमिंग सेवा अनलाइन उपलब्ध छ। वेबसाइट टिभी सेवाबाट सामग्रीले भरिएको छ। आज केहि शानदार कार्यक्रमहरू हेर्नको लागि यो लोकप्रिय विकल्प हो। युवाहरू यी दिनहरू सँधै नयाँ सामग्रीको खोजीमा छन्। २०२० यो वर्ष हो जुन उत्कृष्ट मनोरन्जनले भरिएको छ। सबैजना नयाँ खोज्दैछन् स्ट्रिम गर्न शो र चलचित्रहरू । घरमै अड्किएर बस्दा महिनौं बित्दै जान्छ। विद्यार्थीहरू विशेष गरी केहि महान सम्झौताको लागि खोजी गर्दैछन्।
तपाईं यी योजनाहरू अन्वेषण गर्न सक्नुहुनेछ र केहि सस्तो सामग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस गाईडमा, हामी HBO नाउ विद्यार्थी छूट प्रस्तावलाई हेर्नेछौं। हामी यस सेवाका सम्बन्धमा तपाईंको सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रयास गर्ने छौं।
के HBO अब विद्यार्थी छूट छ?
HBO Now एक प्रीमियम स्ट्रिमि streaming सेवा है। उनीहरूसँग नेटफ्लिक्स जस्ता स्ट्रीमि g दिग्गजहरूको तुलनामा सानो प्रयोगकर्ता आधार छ।प्लेटफर्मले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई विद्यार्थी छूट प्रदान गर्दै थियो। यो हाल नयाँ ग्राहकहरु को लागी प्रयोगको लागि उपलब्ध छैन।
केही समय अघि प्रस्ताव समाप्त भयो। नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले विद्यार्थी छुट कार्यक्रममा भाग लिन सक्दैनन्।केहि महिना अघि सम्म यो लोकप्रिय कार्यक्रम थियो। पहिले नै सदस्यतामा भएका प्रयोगकर्ताहरूले सुविधाहरू प्राप्त गर्न जारी राख्न सक्छन्। सदस्यता लागत केवल केही डलर कम छ।
HBO मा परिवर्तन हुन्छ?
HBO हालै रिब्रेन्डिंग प्रक्रियामा छ। तिनीहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दै छन् हामी तिनीहरूको सेवा प्रयोग गरी स्ट्रिम गर्न सक्दछौं। एचबीओ नाउमा परिवर्तन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। वेबसाइट अब नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि पूर्ण रूपमा कार्यशील छैन। तपाईं HBO अधिकतम मार्फत HBO अनलाइन सेवाहरूको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। HBO नाउ प्लेटफर्म बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। यो अब यूएसए भित्रका प्रयोगकर्ताहरूका लागि मात्र उपलब्ध छ। HBO नाउ वेबसाइट अत्यधिक अनुत्तरदायी भएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ खाता बनाउन वा उनीहरूको सेवाहरूको लागि साइन अप गर्न सक्दैन।
HBO अब नि: शुल्क परीक्षणको लागि साइन अप गर्न चरणहरू:
विद्यार्थी छूट गएको हुन सक्छ, तर तपाईं अझै साईन अप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै संख्यामा कार्यक्रमहरू छन् जुन स्ट्रिम गर्न लायक छ। तपाइँको मनपर्ने टिभी कार्यक्रम को लागी एक इन्टरनेट स्ट्रीमिंग सेवा को लागी अविश्वसनीय छ। तपाइँ कुनै पनि समयमा फिर्ता आउन सक्नुहुन्छ प्रस an्ग स्ट्रिम गर्न जुन तपाईंले छुटाउनु भएको छ। हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो मार्गनिर्देशनले तपाईंलाई उत्कृष्ट सामग्री स्ट्रिम गर्न ठूलो सहयोग गर्दछ। यहाँ उत्तम चरणहरूका लागि तपाईं अनुसरण गर्न सक्ने चरणहरू छन्।
तपाईंको सदस्यता सुरू गर्न तपाईले HBO नाउ वेबसाइटमा जानुपर्नेछ। तपाईं यो लिंकमा क्लिक गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ - https://www.hbomax.com/ । गृह पृष्ठले तपाईंलाई बिभिन्न आश्चर्यजनक कार्यक्रमहरू र उपलब्ध चलचित्रहरू देखाउँदछ।तपाइँ तपाइँको नि: शुल्क परीक्षण बटन को शुरू मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षण नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि सात दिनको लागि उपलब्ध छ।
कुनै पनि स्ट्रिमि service सेवा प्रदायक जस्तै, तपाइँ प्रयोगको लागि एक खाता बनाउनु पर्छ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो नाम, ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्न, र पासवर्ड सिर्जना गर्नुपर्नेछ। तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु पर्दछ कि पासवर्ड तपाईको मद्दतको लागि सुरक्षित र सहज छ। नियम र सर्तहरू स्वीकार गर्नुहोस् HBO अधिकतम तपाइँको खाता बनाउन को लागी।
प्रक्रियाको अन्तिम चरण भनेको तपाईंको भुक्तान जानकारी थप्नु हो। प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको क्रेडिट कार्ड वा PayPal थप्न सक्दछन्।यसले तपाईंलाई निःशुल्क परीक्षण सुरू गर्न मद्दत गर्दछ। एक पटक यो जानकारी उपलब्ध भएपछि प्रयोगकर्ताहरूले सेवाका फाइदाहरूबाट आनन्द लिन सक्दछन्। सात दिनको अवधि तुरून्त सुरु हुनेछ।
आश्चर्यजनक! अब तपाइँ HBO अधिकतम मार्फत एक उत्कृष्ट स्ट्रिमि experience अनुभवको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
HBO छात्र छूट को मूल्य:
HBO छात्र छूट को लागत प्रति महीना 99 9.99 छ (अधिक करहरू)। यो सदस्यता को एक उच्च मूल्य संग एक प्रीमियम सेवा हो। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना विद्यार्थी आईडीहरूको साथ केही फाइदा लिन्छन्। आजका दिनहरूमा तपाईले नयाँ खाताको साथ छुट पाउन सक्नुहुन्न। महंगा सदस्यता विचार गरी लागत बुझ्न सकिने छ। नियमित प्रदर्शन अधिक खर्च हुनेछ। पुरानो प्रयोगकर्ताहरूसँग HBO Now का बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। उनीहरूको योजना मान्य रहनेछ जबसम्म उनीहरूको विद्यार्थी स्थिति बरखास्त हुँदैन। HBO ले निरन्तर तपाईंको आईडी प्रमाणीकरण गर्दैछ कि यो सुनिश्चित गर्न कि विद्यार्थीहरूले मात्र यो प्रस्ताव उपयोग गर्दछन्।
कसले नि: शुल्क HBO अधिकतम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ?
HBO यस वर्ष तिनीहरूको प्रयोग सर्तहरू अपडेट गरीरहेको छ। नयाँ ब्रान्ड र सेवाहरू जनता बीच अत्यधिक लोकप्रिय भइरहेका छन्।
HBO अधिकतम प्लेटफर्मले रिडान्डन्सीहरू कम गर्ने लक्ष्य राख्दछ। HBO अब उपभोक्ताहरूले HBO अधिकतम सेवा प्रयोग गर्न सक्दछन्। मेडिया २ May मे देखि यो अद्यावधिक चलिरहेको छ। व्यक्ति जो DH का साथ HBO का सदस्य छन् उनीहरूको अधिकतम सेवाहरू नि: शुल्क पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्।
तपाईं आधिकारिक वेबसाइटबाट प्रदायकहरूको सूची जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। ठूला टिभी स्ट्रिमि and र DTH सेवाहरू पहिले नै तिनीहरूको प्लेटफर्ममा HBO छन्। प्रयोगकर्ताहरूले HBO अधिकतम प्लेटफर्ममा प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर साइन इन गर्न सक्दछन्।
यहाँ लिंक छ - https://help.hbomax.com/Answer/Detail/2360 । सेवा प्रदायकहरूको पूर्ण सूची यहाँ उपलब्ध छ।
HBO का सुविधाहरू:
HBO अधिकतम सेवाले धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। स्ट्रीमिंग सेवाहरू जनता बीच अनुकूल भइरहेका छन्। यो अधिक ग्राहकहरु को लागी उभिनु महत्वपूर्ण छ। यसले तपाईंको खरीदलाई मूल्य थप गर्दछ। प्लेटफर्ममा एक नजर राखौं।
१. HBO मा सबै हेर्नुहोस्
HBO एक प्रीमियम टीवी स्टूडियो हो। तिनीहरूको प्लेटफर्ममा उपलब्ध अपवादहरू प्रभावशाली छन्। हामी यसलाई हाम्रा सबै पाठकहरूलाई सिफारिस गर्दछौं। उनीहरूसँग गेम अफ थ्रोन्स, वाचमेन, र युफोरिया जस्ता भर्खरका रिलीजहरू जस्ता उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू छन्। प्लेटफर्ममा बहिष्करण माध्यममा लगानी गर्न एक ठूलो कारण हो।
हामी २०२० मा अनलाइन मनोरन्जनतिर गइरहेका छौं। कार्यक्रम स्थल दुबै जाने र टिभी स्क्रिन मनोरन्जनको लागि एक राम्रो खरीद हो।
स्ट्रिमिंग प्लेटफर्मले राम्रो परिणामहरू अपेक्षा गर्न सक्दछ जब त्यहाँ उत्कृष्ट उत्कृष्टहरू छन्।यो सेवा को उपयोग को लागी तपाइँलाई एक थप प्रोत्साहन दिन्छ।आजका दिनका सबै स्ट्रिमिंग विकल्पहरूले तपाईंलाई मौलिक शोको स offer्ग्रह प्रदान गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई मूल खरीद गर्न प्रेरित गर्दछ।
HBO अधिकतम नयाँ सामग्री रोलिंग लगभग हरेक महिनामा छ।तिनीहरू २०२० भरि अचम्मका नयाँ कार्यक्रमहरूको प्रतिज्ञा गर्छन्।
Multi. बहुविध दर्शकहरू
HBO अधिकतम एक शानदार प्लेटफर्म हो जसले तपाईंलाई सजिलैसँग बहुविध उपकरणहरूमा स्ट्रिम गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईं फोरममा उपलब्ध कार्यक्रम र चलचित्रहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईंलाई गो मा अवलोकन गर्दा डाटा बचत गर्न मद्दत गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले एकै समयमा उनीहरूको स्मार्टफोन, टिभी, ट्याबलेट, र ल्यापटपमा प्ले गर्न सक्दछन्। यो प्लेटफर्महरूमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
यी केहि महान सुविधाहरू थिए जुन HBO म्याक्सले हाल प्रदान गरिरहेको छ। हामी तपाईंलाई उनीहरूमार्फत जानको र प्रगति गर्न सल्लाह दिन्छौं।
HBO को मूल्य निर्धारण:
HBO नाउ छूटको लागि कुनै नयाँ सदस्यताहरू उपलब्ध छैनन्। तपाईं HBO अधिकतम प्लेटफर्मको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरूको लागत व्यावहारिक र पुरानो फोरमको समान छ।सेवाहरू प्रत्येक महिना १..9999 को लागि उपलब्ध छन्। यो एक उचित रकम हो र टिभी हेर्नका लागि तपाईंको खर्च कम गर्दछ।
दुर्भाग्यवश, त्यहाँ HBO अधिकतम को लागी कुनै विद्यार्थी छुट छैन।प्रयोगकर्ताहरूले प्लेटफर्ममा केही निःशुल्क एपिसोडहरू हेर्न सक्छन्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - https://www.hbomax.com/watch-free ।
HBO अब विद्यार्थी छूट अब उपलब्ध छैन। सम्पूर्ण प्लेटफर्मले एक विशाल सुधार ल्याइरहेको छ। हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो मार्गनिर्देशनले तपाईंको सबै शंकाहरूको जवाफ दिन सक्छ। उत्कृष्ट सामग्री स्ट्रिमिंगको उत्कृष्ट समयको आनन्द लिनुहोस्।
तपाईंलाई मनपर्न सक्ने अन्य विद्यार्थी प्रस्तावहरू:
श्रव्य विद्यार्थी छूट
अमेजन प्राइम छात्र छूट
चलचित्र नि: शुल्क अनलाइन स्ट्रिम हेर्नुहोस्
नयाँ चलचित्रहरू डाउनलोड गर्न उत्तम साइट
सर्वश्रेष्ठ अनलाइन साइटहरू फिल्महरू हेर्नका लागि
शीर्ष श्रृंखला अनलाइन निःशुल्क मा जीवन
इमुलेटर पीसीमा खेल्नको लागि उत्तम खेलहरू